RASMI: Labo laacib oo ka kala tirsan kooxaha Chelsea iyo Atletico Madrid oo siyaabo kala duwan looga saaray xulka qaranka England – Gool FM
(London) 13 Okt 2020. Labo ciyaaryahan oo ka kala tirsan Kooxaha Atletico Madrid iyo Chelsea ayaa siyaabo kala duwan looga soo saaray xulka qaranka England.
Ben Chilwell iyo Kieran Trippier ayaa labadaba laga saaray shaxda xulka qaranka England ee Arbacada wajahaya dhiggooda Denmark.
Daafaca garabka bidix ee kooxda Chelsea, Ben Chilwell, kaasoo seegay kulankii Axaddii xulkiisa saddexda libaax uu guul ka gaartay Belgium ayaa looga soo saaray xulka England sabab la xiriir dhaawac uu hore cagta uga qabay.
Dhinaca kale difaaca Kooxa Atletico Madrid ee Trippier ayaa isagana la sheegay in sababo shaqi loogu ogoolaaday inuu ka baxo shaxda xulka England, inkastoo aan la faah-faahin arrintaasi shaqsiyadeed waxa ay tahay.
RASMI: Laacibka ku guuleystay xiddiga bisha September ee Kooxda Arsenal oo la shaaciyey